Australian Visa Applicants and Hepatitis (Burmese) by Hepatitis SA - Issuu
သြစတြေးလျဗီဇာ လျှောက်ထားသူနှင့် အသည်းရောင်အသားဝါဘီ
ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖော်ကို ဒေသမှာရှိတဲ့
နာတာရှည် ကျန်းမာရေးရောဂါရှိခြင်းသည် ဗီဇာလျှောက်ထားရန်
သင်လျှော်မှုနည်းတယ်လို့ မဖြစ်သင့်ပါ။ သို့သော် ထို့သို့ နာတာရှည်
အထူးစစ်ဆေးချက်များ နှင့် အသည်း ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း
ကျန်းမားရေးရောဂါရှိခြင်းသည် ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် ပိုမိုခက်ခဲစေပါသည်။
များပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့မှာ အသည်းရောင်အသားဝါ
ဒီစာဆောင်သည် နာတာရှည် အသည်းရောင်အသားဝါ ရောဂါရှိသူများအတွက်
ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို နားလည်စေရန် စမှတ် အနေဖြင့် ကူညီလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီစာဆောင်တွင် ပါဝင်သော အချက်အလက်များကို သြစတြေးလျ
လက်ရှိ ရှိနေလျှင် ထုတ်ဖော် ပြောဆို ရပါမည်။ နာတာရှည် ကူးစက်ရောဂါ ရှိသူများသာလျှင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်းခြင်း အတွက် ကျန်းမာရေး သည် ပြဿနာ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ခေတ္တခဏနေထိုင်ခွင့် ဗီဇာအတွက် ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်
အစိုးရပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌါန ဝက်ဆိုက်မှ ရရှိပါသည်။ ဒီစာဆောင်သည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု ဥပဒေရေးရာ အကြံပေးချက်များ အစား အစားထိုးမရပါ။
ဗီဇာလျှောက်ထားသူတိုင်းသည် အသည်းရောင်အသားဝါ ပိုး ရှိခဲ့ဖူးလျှင် သို့မဟုတ်
ဆိုလိုသည်မှာသူမသည် ဘာဆေးဝါးကုသမှုမှမလိုအပ်သလို ထိုသို့ရှိခြင်းသည်လည်း ပြဿနာ တစ်ရပ်မဟုတ်ခဲ့ပါ။
မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ သင်၏ဆရာဝန် နှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေး ဥပဒေအကြံပေး အဖွဲ့အစည်း
ခေတ္တခဏ နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသူ များအတွက် အသည်းရောင်အသားဝါ
ပိုးသွေးစစ်ဆေးမှု နှင့် အခြားသော သွေးမှ တစ်ဆင့်ကူးတတ်သော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ
တွင် လုပ်ကိုင်နေသောရှေ့နေများဆီ မှ အကြံဥာဏ်များနှင့် ပံ့ပိုးမှုများ ရယူရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
စစ်ဆေးမှုသည် အောက်ပါလူများအတွက် အမြဲတမ်း လိုအပ်ပါသည်။
ဆရာဝန်၊ သွားဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ သို့မဟုတ် ဆေးဘက်အကူ အဖြစ် လုပ်ကိုင်၊ သင်ကြားလိုသူများ၊
အသက် ၁၅ နှစ် နှင့် အထက် လျှောက်ထားမည့် သူများ၊ မွေးစားခံ ကလေးငယ်များ သို့မဟုတ် သြစတြေးလျ နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရ
ကျန်းမာရေး လိုအပ်ချက် နှင့် စစ်ဆေးမှု သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ဗီဇာလျှောက်ထားသူ အများစု သည် သတ်မှတ်ထားသော အနည်းဆုံး ကျန်းမာရေး အဆင့်ကို မှီမမှီ စမ်းသပ်ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အရာကို
၏ စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင်ရှိသော ကလေးများ ( အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး တစ်မျိုးသာ)၊
သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ကလေးမွေးဖွါးရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ ( အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး တစ်မျိုးသာ)၊
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌါန မှ “ကျန်းမာရေး လိုအပ်ချက်” ဟုခေါ်ပါသည်။ ထိုအရာသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကျန်းမာရေး ဘဏ္ဍာ သုံးစွဲမှုအား ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချို့သော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ (နာတာရှည် အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ အပါအဝင်) သည် ထိုအချက်များပေါ်တွင်
အကယ်၍ သင်သည် ခေတ္တခဏနေထိုင်ခွင့် ဗီဇာလျှောက်ထားပြီး
သက်ဆိုင်ရာမှ သင့်၏ နာတာရှည် အသည်းရောင်အသားဝါ ရောဂါအကြောင်းကို
အကယ်၍ သင်သည် အမြဲနေထိုင်ခွင့် ဗီဇာလျှောက်ထားသူဖြစ်လျှင်၊
အများပြည်သူကျန်းမာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု စဉ်းစားပါလိမ့်မည်။
သက်ဆိုင်ရာမှ သင်အား အသည်းရောင်အသားဝါ ရောဂါပိုးအပါအဝင် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးချက်များပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ဖို့ ညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် ခေတ္တခဏနေထိုင်ခွင့် ဗီဇာလျှောက်ထားသူဖြစ်လျှင် ကျန်မာရေး
စစ်ဆေးချက်များပြုလုပ်ရန် လိုချင်း မလိုချင်းသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် မည်မျှကြာရှည်အောင် နေထိုင်မည်လဲ။ မည်သည့် အလုပ်အကိုင်များ လုပ်ဆောင်ချင်သလဲ နှင့် သင်လျှောက်သော ဗီဇာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကွဲလွဲပါလိမ့်မည်။
သတိထားမိသောအခါ သင်တွင် အောက်ပါအချက်များရှိလျှင် သင့်အခြေအနေအား
သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် နေထိုင်စဉ် ဆရာဝန်၊ သွားဆရာဝန်၊ သူနာပြု သို့မဟုတ်
သင့်၏သွေး နှင့် လူနာ၏သွေး ထိတွေ့ရန် အလားအလာများသော
သင့်၏ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် ပိုးကောင်ရေ ပမာဏ များပြားနေခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက် ပြည့်မှီမှုမရှိဘူး ဟု ဌါနမှဆရာဝန်က
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ပံ့ပိုးမှု
သင့်အား ကျန်းမာရေး အသနားခံစာ လျှောက်ထားခွင့်မပေးလျှင် သင်သည်
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ပံ့ပိုးမှုများကို ရှေ့နေ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားသော
သတ်မှတ်လျှင် သင့်ဖိုင်အားကိုင်သော ဌါနအရာရှိမှ သင့်ထံသို့ “Natural Justice”
ပါလျှင် နောက်ထပ်အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးရန် နှင့် ကျန်းမာရေး အသနားခံစာ
လျှာက်ထား၍ အသနားခံစာတင်လို့ရပါသည်။ ထိုအရာကို Merit reviews
လျှောက်ထားရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မည်။
ဟုခေါ်သည်။ ထိုသို့ ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန် စာတင်ခြင်းအတွက် ယခုအချိန်တွင်
သင်သည် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် ဗီဇာလျှောက်ထားသူဖြစ်ပြီး သင့်တွင် နာတာရှည် အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ ပိုးရှိလျှင် သင်သည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးချက်များ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံတွင် ထိုသို့စစ်ဆေးမှုကို (Panel Physicians)သမားတော်များ ဦးဆောင် စီမံသော အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းအတွက် BUPA မှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌါနအစား ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ သမားတော်များသည် သူတို့၏ တွေ့ရှိချက်များ (သင်၏ သွေးစစ်ဆေးချက်အဖြေများအပါအဝင်) ကို Commonwealth ဆရာဝန်ဆီထံပို့၍ ထိုသူမှ စစ်ဆေးချက်များကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များပြည့်မှီ မမှီ ထင်မြင်ယူဆချက်များ ပေးပါလိမ့်မည်။ သူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် သင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကုန်ကျစရိတ် ကြီးမားခြင်း နှင့် (သို့မဟုတ)် လုံလောက်မှုမရှိသော ကျန်းမာရေး နှင့် ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများ လိုအပ်ခြင်း ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။
စာဆောင်ပို့ပါလိမ့်မည်။ သင်လျှောက်သော ဗီဇာ အမျိုးအစားတွင် PIC 4007
ကျန်းမာရေး အသနားခံစာ ဗီဇာတိုင်း ကျန်းမာရေး အသနားခံစာ လျှောက်ထားလို့မရနိုင်ပါ။ သို့သော် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသော ဗီဇာများစွာ ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေး အသနားခံစား လျှောက်ထားခွင့်ရှိသော ဗီဇာ စာရင်းများအား အောက်ပါ လင့်တွေ တွေ့နိုင်ပါသည်။ www.border.gov.au/Trav/Visa/Heal/overview-of-the-health-requirement/ visas-that-have-a-health-waiver-provision ကျန်းမာရေး အသနားခံစာပေး မပေး ဆုံးဖြတ်ချိန်တွင် ဌါနမှ
ယခုဆုံးဖြတ်ချက်အား Administrative Appeals Tribunal (AAT) သို့ေ
ဒေါ်လာ ၁၇၃၁ ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ AAT သည် ယခင်ပေးထားသော မူလပထမ
နောက်ထပ် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေး မှတ်ပုံတင်ဌါန သို့ ၁၃၀၀ ၂၂၆ ၂၇၂ သို့ဆက်သွယ်၍ သော်လည်းကောင်း အောက်ပါ
လိုအပ်ချက်ပြည့်မှီတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး သင့်၏ ဖိုင်အား သင့်ဗီဇာနောက်ဆုံးအဆင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ဌါနသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ တရားရုံးတွင် သင်အောင်မြင်မှု အများဆုံးရရှိရန် အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေး ဥပဒေအကြံပေး အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေး ဥပဒေ အထူးပြု နှင့် (သို့မဟုတ)် တရားရေး အလုပ်များ သင့်၏ဖိုင်အား ကူညီပြင်ဆင် ပြီး သင့်အစား တင်ပြပေးမည့်
ဖုန်း 03 9285 4888 (မဲလ်ဘုန်းအရှေ့ပိုင်း ရက်ကွက်များတွင် နေထိုင်သူများအတွက်သာ)
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေး ဥပဒေအကြံပေး အဖွဲ့ နှင့် ပြောဆိုပါ သို့မဟုတ် AAT ဝက်ဘ်ဆိုက်
ဥပမာအားဖြင့် သင့်အရည်အချင်းသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံအတွက် တန်ဖိုးရှိခြင်း
သင့်ကျန်ရှိနေသေးသည့် သက်တမ်းတလျှောက်တွင် ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀
သင့်ဆရာဝန်၏ ဆေးမှတ်တမ်း ဥပမာ သင့်လက်ရှိ ပိုးကောင်ရေ ပမာဏသည် နောင်တွင် ဆေးဆက်လက်သောက်ရန် မလိုကြောင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေး
အသည်းအစားထိုးခြင်း ကဲ့သို့သော လုပ်ဆောင်မှုများ ကို လုံလောက်မှုမရှိသော
ဥပဒေအကြံပေး အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေး ဥပဒေ အထူးပြု
ရှေ့နေ့များထံမှ ဒီအဆင့်အတွက် အကြံဥာဏ်များ ရယူရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ခေါ်ဆိုမှု အသုံးအနှုန်းများ Administrative Appeals Tribunal – သြစတြေးလျ အစိုးရမှ ပြန်လည်သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌါ – ပြန်တွင်းသို့လာရောက်နေထိုင်မှုများ၊ ခိုလှုံသူများ နှင့် နိုင်ငံသား ရေးရာများကို တာဝန်ယူသော သြစတြေးလျ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း။
လိုအပ်ချက် ပြည့်ဝမှု ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ရှိပြီးသားတခြား ကျန်းမာရေးအခြေအနေပေါ်တွင်
ကျွန်တော့် လျှောက်ထားမှုအတွက် အသုံးဝင်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဆေးမှတ်တမ်း ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ ဆရာဝန် ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။
လည်း အတူတူစဉ်းစားသည်။ အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် အချက်မှာ သြစတြေးလျ ပြည်သူလူထုအပေါ် ကုန်ကျမည့်စရိတ်သာဖြစ်သည်။
ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားမှု၊ လုံလောက်မှုမရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်သတ်ဆိုင်သော နောက်ထပ် သတင်းအချင်းလက်များကို အောက်ပါ လင့်တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် ။ www.homeaffairs.gov.au/trav/visa/heal/overview-of-the-health-requirement/ significant-costs-and-services-in-short-supply
ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက် – ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံးပြည့်မှီရမည့် ကျန်မာရေး အခြေအနေ။ ပြည့်မှီမှုမရှိသောသူများအား ခွင့်ပြုထားသည့် စာဆောင်။ Commonwealth မှ ဆရာဝန် – ဗီဇာလျှောက်ထားသူသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု Merit review – မှ သတင်းအချက်အလက်များကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး သြစတြေးလျ အစိုးရမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသော လုပ်ဆောင်ချက်။
လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ပါလိမ့်မည်။
Panel physician – သြစတြေးလျ အစိုးရမှ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးချက်များ လုပ်ဆောင်ရန်
အကယ်၍ သင့်အား အသနားခံစာလျှောက်ထားရန် ငြင်းပယ်လျှင် သင့်ဗီဇာ အား
မှတ်ပုံတင်ထားသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေး ဥပဒေ အကြံပေးအဖွဲ့ – ဗီဇာ
Refugee & Immigration Legal Centre Inc (RILC) Level 6, 20 Otter Street, Collingwood, Victoria. 3066	ဖုန်း 03 9413 0101 အီးမေးလ်း rilc@rilc.org.au
The Australasian Society for HIV Medicine (ASHM) ASHM သည်လည်း အမြဲနေထိုင်ခွင့် ဗီဇာလျှောက်ထားပြီး အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး ရှိသော လူနာများ၏ ဆရာဝန်များအတွက် ရေးသားရမည့်ပုံစံ ထုတ်ဖော် ပံ့ပိုးထားပါသည်။ ထိုစာကို အောက်မှ ဖော်ပြထားသော လင့်တွေ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ www.ashm.org.au/products/product/hepbandimmigration
ကျန်းမာရေး အသနားခံစာ – ဗီဇာလျှောက်ရာတွင် ကျန်မာရေးလိုအပ်ချက်
ပြည့်မှီခြင်း ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်သူ။
သင့်အား အသနားခံစာလျှောက်ထားရန် ခွင့်ပြုလျှင် သင့်ဗီဇာလျှောက်ထားမှု
ဝက်ဘ်ဆိုက် : www.rilc.org.au
ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးချက် – ကျန်မားရေး အတတ်ပညာရှင်များမှ စစ်သော ကျန်းမာရေး။
ကျွန်တော့် ရှေ့နေ ပြောပြချက်အရ ကျန်းမာရေး
Suite 2, Town Hall Hub, 27 Bank Street, Box Hill, Victoria. 3128	ဝက်ဘဆိုက် : www.miceastmelb.com.au
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ အတွက် သင့်၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော
ထက်ကျော်လွန်မည်လို့ ခန့်မှန်းလျှင် ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားသည် ဟု သတ်မှတ်ခြင်း၊
Migrant Information Centre (မဲလ်ဘုန်း အရှေ့ပိုင်း)
အချိန်လည်းကြာရှည်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့လုပ်ခြင်းသာလျှင် သင်အမြဲနေထိုင်ခွင့်
တစ်ခြားအရာများက ပိုမိုများကြောင်းကို သေချာစွာ ရှင်းလင်းပြောဆိုရပါမည်။
ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်သည် နောင်အခါတွင်လျှော့နည်းသွားနိုင်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ်
လိပ်စာများသို့လည်း ဆက်သွယ်နုင်ိပါသည်။
ရှေ့နေ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဒီတရားရုံး လုပ်ဆောင်မှုအဆင့် သည် ကုန်ကျစရိတ်များပြီး ဗီဇာရရှိရန် တစ်ခုသော နည်းလမ်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ရောဂါအခြေအနေများအတွက် အသုံးပြုရမည့် ကုန်ကျစရိတ် သည်
လုပ်ငန်းများ အတွက် သင့်အားကူညီရန် အရည်အချင်းပြည့်ဝကြပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် ဌါနမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်ပိုင်း ထပ်မံရရှိသည့်
တရားဝင် ရေးတင်ရာတွင် သင့်ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ်များနှင့် ဆိုးကျိုးများထက်
(လခစားအလုပ် သို့မဟုတ် လခမရသောအလုပ)် ၊ လက်ရှိသင် ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေ၊
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေး ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့များသည် သင်၏ ဗီဇာ လျှောက်ထားမှု
သတင်းအချက်များ အားလုံးကို ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီး သင်သည် ကျန်းမာရေး
မပေးမဖြစ်အခြေအနေများအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ ကျန်မားရေး အသနားခံစား
ယခုအချိန်တွင် နာတာရှည် သို့မဟုတ် အချိန်တို ( ၅ နှစ်အောက်)
ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေး ဥပဒေအကြံပေး အဖွဲ့ထံမှ ရရှိနိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသော
ဒီသယံဇာတ၏ ဘာသာပြန်ထားသော ဗားရှင်းဒီမှာပါ www.hepvic.org.au/page/1282/Australian-visa-applicants-and-hepatitis. အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး သို့မဟုတ် စီပိုးအကြောင်း ပိုမို၍ သိချင်လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ Hepatitis
Victoria ဝက်ဘ်ဆိုက် ကို လေ့လာခြင်း သို့မဟုတ်
အသည်းရောင်အသားဝါ Infoline ၁၈၀၀ ၇၀၃ ၀၀၃ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း များပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
လျှောက်ထားခြင်းများတွင် တတ်ကျွမ်းသော သူ။ လုံလောက်မှုမရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ – ဥပမာ ကိုယ်တွင်း အဂါင်္ အစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ သွေးရည်ကြည်များ။ ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ် – ကျန်းမာရေးကြောင့် ကုန်ကျမည့် ငွေပမာဏ။
ဒီစာဆောင် ဖြစ်မြောက်အောင် အကူအညီပေးသော Lachaln Riches, Uyen Vo နှင့် အေးအေးခိုင် တို့အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Australian Visa Applicants and Hepatitis (Burmese)
Useful information and guide in Burmese for people living with hepatitis who are applying for and Australian visa. Published by Hepatitis Vi...